Dugsiga Barashada Culuumta Diyaaradaha Oo Markii Ugu Horaysay Laga Furayo Somaliland
(Hadhwanaagnews) Tuesday, August 01, 2017 19:25:45
Hargeysa(HWN):-Dugsiga Barashada culuumta diyaaradaha ee Somaliland Aviation Academy ayaa si rasmi ah dhawaan looga furi doono magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.
Dugsigan lagu baranayo culuumta diyaaradaha oo ay ugu horayso waddida diyaaradaha(Pilot) ayaa noqonaya dugsigii ugu horeeyey ee laga furo guud ahaan wadamada somaliland iyo soomaaliya waxaana hir gelinaya muwaadiniin u dhashay somaliland.
Ardayda wax ka baran doonta dugsigan ayaa ku qaadan doonta culuumta kala duwan ee diyaaradaha, iyada oo ardayda baranaysa waddida diyaaraduhuna ay qaybta Practical-ka ah ku soo qaadan doonaan wadanka Koonfurta Afrika.
Sidoo kale dugsigan ayaa wadanka somaliland ka hir gelinaya shirkad lagu magacaabo Moon Air Aviation oo keentay diyaarado u kala baxa guud ahaan gobolada dalka, kuwaas oo qaadaya dadka rakaabka ah ee u kala socdaalaya gobolada waa weyn.
Sidoo kale diyaaradahan u kala gooshaya gobolada Dalka ayey u qorshaysan tahay inay duulimaadyo gaar ahna u sameeyaan siyaasiyiinta somaliland ee safarada kala duwan ku maraya gobolada Dalka.
Sidoo kale diyaaaradan ayaa duulimaad ku tagi doonta magaalada Cadan ee wadanka Yemen taas oo qaadaysa rakaabka u kala gooshaya wadamada somaliland iyo Yeman.